Xayeysiiso - iHorror
The # 1 Wararkii Ugu Xumnaa ee Argagaxa lahaa, Dib u eegista iyo Aaladaha Warbaahinta oo in kabadan 43.5 Million Aragtidooda Billaha ah
iHorror waa mid ka mid ah kuwa ugu koritaanka badan uguna caansan noocyada nooca naxdinta leh. iHorror waxaa si gaar ah loogu meeleeyay inuu yahay madal kaliya oo warbaahineed oo heegan ah si loogu mashquuliyo taageere-ad-adag iyo dhagaystayaasha filim-cabsida aan caadiga ahayn. Iyada oo la gaari karo iyo aqoonsi sumcad leh, iHorror wuxuu ku habboon yahay noocyada guud si ay ula falgalaan macaamiishan aadka ugu hawlan uguna daacadsan macaamiil run ah oo gees ah iyagoon aad ugu sii jeedin.
Waxaan isbedel ku sameyneynaa sida ganacsiga madadaalada ay ula macaamilaan dhagaystayaashooda. U gudbinta ku xirnaanta kanaal fara badan oo leh aalado ka faa'iideysta qodobbada xogta, aragtida, iyo hufnaanta guud ahaan barxadda iHorror.
32.6 M Muuqaal Muuqaal ah
4.2 Milyan oo Raac
24.2 K Raacayaasha
123 K Raacayaasha
604 K Raacayaasha
Nooca naxdinta leh wuxuu ka keenay $ 1 Billion xafiiska sanduuqa.
Taageerayaasha naxdinta leh waxay aadaan tiyaatarka waxayna ku qarash gareeyaan lacag ka badan noocyada kale ee filim sameeyaha.
Ku dhowaad 50% dhammaan taageerayaasha cabsida ayaa ka qayb gala filimada in ka badan 12 jeer sanadkii.
Dhageystayaasha cabsida badan ayaa ka duwan kuwa celceliska celceliska dhagaystayaasha.